Laamaha amaanka Puntland oo Bosaaso kusoo bandhigay dhalinyaro dhac geysan jiray-DAAWO • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Laamaha amaanka Puntland oo Bosaaso kusoo bandhigay dhalinyaro dhac geysan jiray-DAAWO
February 16, 2019 - By: Abdirisak Faamoos
Taliska guud ee Booliiska Puntland iyo kan gobolka Bari ayaa maanta magaalada Boosaaso kusoo bandhigay dhalinyaro ay sheegeen in ay dhac u geysan jireen bulshada rayidka ah ee ku dhaqan magaalada Boosaaso.
Dhalinyarada lasoo qabtay
Dhalinyaradan lasoo bandhigay oo gaaraya 20 iyo qaar kale oo ku xiran saldhigyada Boosaaso ayay laamaha amaanku sheegeen in ay dhibaato xoogan ku hayeen bulshada isla markaana ay ka furan jireen dadka taleefanada iyo hantida kale ee ay wataan.
qaar kamid ah hubkii ay dhaca ku geysan jireen dhalinyarada
Taliyaha Booliska Puntland Gen.Muxiyadiin Axmed Muuse oo ka hadlay goobta lagu soo bandhigayay ayaa xusay in cadaalada la marsiinayo cid kasta oo khalkhal ku abuurtay amniga ,waxa uuna xusay in dhalinyarada lasoo bandhigay ay yihiin kuwa caadeystay dhaca dadka rayidka iyagoo adeegsanaya toorey iyo waliba hubka kale.
Taliyaha ayaa ku amaanay ciidamada amaanka sida wanaagsan ee ay ugu guuleysteen soo qabashada dhalinyaradan wuxuuna intaa ku daray hadalkiisa in ay sii wadi doonaan ciidamada howlgalada lagu soo qabanayo dadka khalkhalka ku wada amaanka magaalada Boosaaso.
Sidoo kale gudoomiyaha gonolka Bari iyo Duqa Boosaaso oo goobjoog u ahaa goobta lagu soo bandhigayay dhalinyaradan ayaa dhankooda xusay in talaabo laga qaado cidkasta oo dhibaato u geysta bulshada, soo qabashada dhalinyaradan dhaca u bareerayna ay qeyb ka tahay dib usoo celinta amaanka magaalada Boosaaso.
Ugu dambeyn shacabka ayay ugu baaqeen in ay la shaqeeyaan ciidamada amaanka si looga hortago waxyaabaha khalkhal galinaya amaanka xarun ganacsiyeedka Puntland ee Boosaaso.
Laamaha amaanka oo Boosaaso kusoo bandhigay dhalinyaradii dhaca iyo furashada u geysan jiray shacabka Boosaaso
Posted by Horseed Media on Saturday, February 16, 2019